Faah faahin kasoo baxeysa dagaal ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Faah faahin kasoo baxeysa dagaal ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose
Faah faahin kasoo baxeysa dagaal ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose
Dagaalka ayaa yimid, kaddib markii sida la sheegay Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ku leeyihiin deegaanka hoosingow oo hoostaga degmada Badhaadhe ee Gobolka Jubbada Hoose, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Dadka degaanka Hoosingow ayaa waxaa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac, sidoo kalena uu jiro khasaaro dagaalka kasoo gaaray labada dhinac iyo dad rayid ah.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaanka Hoosingow ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Kenya ay degaankaas ka wadaan dhaq dhaqaaqyo Ciidan maadaama Saldhiga ay ku sugan yihiin la weeraray.
Previous articleMaxaa ka jira in France ay bixineyso kursigeeda joogtada ah ee Golaha Ammaanka?
Next articleSoomaaliya & Indonesia oo ka wada-hadlay fududeynta Ganacsiga
Madaxweynaha Maamulka Puntland oo ka hadlay geerida taliyihii hore ee Ciidanka...
Ra’iisul Wasaare Rooble oo u dhoofay dalka Qatar